Aquarium biyo macaan | Kalluunka
Aquarium-ka biyaha qabow
Sida aan wada ogsoonahay way jiraan kalluunka biyaha cusbada leh iyo kalluunka biyaha macaan. Labadaba waxaa lagu noolaan karaa aquariums-ka. Laakiin tan waxaan u baahanahay inaan ku ogaanno wax walba oo jira oo loogu talagalay nooc kasta oo quraaradda ah. Goobtan waxaa ku yaal wax kasta oo aad u baahan tahay inaad haysato aquarium biyo nadiif ah kaas oo kalluunkeenu ku noolaan karo xaaladaha ugu fiican.
Talooyin, fikrado, maadooyin iyo faahfaahin, kalluunka si uu ugu raaxeysto deegaan aad ugu eg kan dabiiciga ah, waxaan ognahay inuusan isku mid aheyn, laakiin hadaan jecel nahay kalluunka, waa hab wanaagsan oo loo daryeelo, nagu wargelinaya mawduuca iyo astaamaha ama agabyada ay tahay inaynu ogaano oo aynu leenahay si kalluunka biyaha macaan ugu noolaado kuweena aquarium biyo nadiif ah.
Ma hilmaami karno inay yihiin nooleyaal iyo inay tahay inaan daryeelno.
Marka ay timaado yeelashada quraaradda, ama biyo qabow ama biyo kulul, cunsurka ugu weyn ee ...
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah aquarium-yada loo isticmaalo in lagu xareeyo tiro badan ama ka yar oo kalluun ah. Maanta waxaan ka hadleynaa ...
Miirayaasha dibedda loogu talagalay quraaradda
Waxaa laga yaabaa inaad haysatid quraaradda oo aad rabto inaad ka dhigto mid nadiif ah oo caafimaad leh intii suurtagal ah si kalluunkaagu u ...
Markaan helno haanta kaluunka waa inaan tixgalino dhinacyo kala duwan intaanan bilaabin isticmaalkeeda, maadaama xoolahani u baahan yihiin ...
Mid ka mid ah walxaha aan lagu waayi karin aquarium kalluunka kulaylaha waa kuleyliyaha aquarium. Mahadsanid
Bandhigga 'Aquarium LED'
Markaan ka bilowno adduunka aquariums waa inaan sidoo kale tixgelino keydinta tamarta. Soosaarida aquarium LED ...
Substrate loogu talagalay aquariums
Markaan bilaabayno isticmaalka aquarium-keena waa inaan ogaano inay jiraan waxyaabo gaar ah oo muhiim ah. Mid ka mid ah…
Markii aan soo galno adduunka aquariums-ka waxaa lagama maarmaan ah inaan helno aquarium wanaagsan oo noo oggolaanaya saxda ...
Markaad leedahay quraaradda, waa inaad go'aansataa dhirta aad dhigeyso labadaba quruxdeeda iyo ...
Mashiinnada hawada ugu fiican ee loogu talagalay aquariums-ka
Sidaad ogtahay, quraaradda waxay u baahan tahay qalab kala duwan inay si sax ah u shaqeyso oo kalluunkayaga lagu ilaaliyo ...
Aquariumyada ugu fiican
Xaqiiqdii waxaad jeceshahay quraaradda kaliya maahan daryeelka kalluunka laakiin sidoo kale soo jiidashada iyo ...
Kalluunka biyaha macaan ee ugu wanaagsan aquarium-kaaga
Biotope Amazon noocyada yaryar
Freshwater Discus Discus Fish
Bilaabida hiwaayadda quraaradda
Diyaarinta quraaradda kalluunka miisaanka leh
Ubax Horn daryeelka kalluunka
Taranka kalluunka cuncunka leh
Biyaha duugga ah, nooc kale ayaa dhaqaalaha nadiifiya
Tilmaamaha korinta kalluunka koi